Nyocha na mmelite nke nsogbu dị mma na-arụcha akwa
Itkpa Mma Mkpịsị
Knitting Mkpịsị Fabric
Naịlọn & spandex akwa
Cotton & naịlọn akwa
Nku anya ntutu
Chemical Mkpịsị Mbelata
Chemical Mkpịsị Fabric
Mkpịsị Mkpịsị Mkpịsị
Mkpịsị Mkpịsị ákwà
1. Common quality nsogbu na adụ finishing:
Nwere ike ghara ruru ruru obi na-adị:
Softdị dị nro nke imecha nro dịgasị iche iche na ihe ndị ahịa chọrọ, dị ka ihe dị nro, nke dị mma, nke na-agbanwe agbanwe, nke dị nro, nke dị nro, nke akọrọ, wdg, dị ka ụdị dị iche iche si ahọrọ ndị dị nro dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, na fim ahụ, e nwere akụkụ dị iche iche nke ihe nro dị nro, ịdị nro ya, enweghị nhịahụ, ịmịcha, acha edo edo, mmetụta ịmịcha akwa dị iche; Na mmanụ silicone, njirimara nke mmanụ silicone gbanwere site na mkpụrụ ndụ ihe nketa dị iche iche dịkwa iche, dị ka mmanụ amino silicone, mmanụ hydroxyl silicone, epoxy gbanwetụrụ mmanụ silicone, carboxyl gbanwere mmanụ silicone na ihe ndị ọzọ.
Agba agba odo:
Ohaneze site na usoro ihe nkiri na amino silicone mmanụ nke amino na-acha. Na ihe nkiri ahụ, ihe nkiri cationic dị nro, na-eche na ọ dị mma, dị mfe adsorption na akwa ahụ, mana ọ na-adị mfe ịcha acha odo odo, hydrophilic, dịka ịhazigharị ihe nkiri n'ime mmanụ dị nro, odo ga-ebelata nke ukwuu, hydrophilic ga-aka mma, dị ka cationic mejupụtara film na hydrophilic silicone mmanụ, ma ọ bụ na hydrophilic gụchara gị n'ụlọnga mejupụtara, ga-mma ya hydrophilicity.
Ihe nkiri Anion ma ọ bụ ihe nkiri na - abụghị - ion adịghị mfe edo edo, ụfọdụ ihe nkiri anaghị acha edo edo, anaghịkwa emetụ hydrophilicity.
Amino silicone mmanụ bụ mmanụ silicone a na-ejikarị eme ihe ugbu a, mana n'ihi na amino ga-eme ka mgbanwe agba na-acha odo odo, nke dị elu nke ammonia, nke ka ukwuu na-acha odo odo, kwesịrị ịgbanwe na obere amino silicone odo ma ọ bụ polyether gbanwetụrụ, epoxy gbanwere silicone mmanụ na-adịghị mfe edo edo.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-eji ndị na-eme ihe nkiri cationic dị ka 1227, 1831, 1631 na emulsion polymerization dị ka emulsifiers, nke nwekwara ike ịmepụta yellowing.
Mgbe emulsifying mmanụ silicone, ojiji nke emulsifier, "mmetụta nkwụsị" ya dị iche, ga-eme ka ọnọdụ dị iche iche nke ịgba na ọkụ agba, abụwo mgbanwe agba.
(3) akwa hydrophilicity belatara:
A na-ejikarị usoro ihe owuwu ihe nkiri na mmanụ silicone eme ihe nkiri mgbe enweghi mmiri nmịnye mmiri, ma mechie dị ka cellulose fiber hydroxyl, ajị carboxyl, amino na ebe ndị ọzọ na-a causedụ mmiri mere ka mmiri ghara ịmịkọrọ mmiri, kwesịrị ịhọrọ dị ka o kwere omume anion, ihe nkiri na-abụghị nke ionic na ụdị hydrophilic nke mmanụ silicone.
(4) ntụpọ gbara ọchịchịrị:
Isi ihe kpatara ya bụ na ehichaghị akwa ahụ tupu ọgwụgwọ, agba ya na-agba ọchịchịrị mgbe ọ na-agba agba. Ma ọ bụ ukwuu ụfụfụ na dyeing bat, ụfụfụ na ifuru sweta, dai ngwakọta na akwa; Ma ọ bụ defoaming gị n'ụlọnga sere n'elu mmanụ mere site ọchịchịrị mmanụ tụrụ; Ma ọ bụ tarred ihe na dai VAT na akwa; Ma ọ bụ dai e ji esiji ákwà n'ọnọdụ dị iche iche agglutinate n'ime ntụ gbara ọchịchịrị; Ma ọ bụ mmiri calcium magnesium ion ukwuu na dai nchikota ke akwa na ndị ọzọ ihe. Iji zubere ọgwụgwọ, dị ka tupu ọgwụgwọ ka ịgbakwunye mmanụ gị n'ụlọnga maka nụchaa, dyeing AIDS iji obere ụfụfụ, ọ dịghị ụfụfụ nwekwara, defoaming gị n'ụlọnga ịhọrọ ụdị nke na-abụghị sere n'elu mmanụ, tinye chelating mmadụ iji melite mmiri mma, tinye solubilizing dispersant iji gbochie dai agglutination, n'oge were ihicha gị n'ụlọnga maka nhicha ahụ cylinder.
(5) ntụpọ ọkụ:
Isi ihe kpatara ya bụ na tupu ọgwụgwọ ahụ abụghị otu, akụkụ ụfọdụ nke ndị dara ogbenye Mao Xiao, ajụla ịcha, ma ọ bụ site na ịjụ ị dụ ihe eji esiji ákwà, akwa ma ọ bụ ịkọ mmiri site na ncha magnesium, ncha, wdg, ma ọ bụ silk enweghị aha, enweghị ma ọ bụ ọkara ngwaahịa nkụ, ma ọ bụ ákwà na etisasịwo sodium sulphate, soda ash na ndị ọzọ na solids, ma ọ bụ dyed tupu ihicha tụlee nke mmiri, ma ọ bụ dyeing nhazi adụ gụchara na nwekwara dị ka stains. N'otu aka ahụ, ọ ga-ezubere iche ọgwụgwọ, dị ka ike tupu ọgwụgwọ, tupu ọgwụgwọ inyeaka gị n'ụlọnga nhọrọ ga-adịghị mfe na-etolite calcium na magnesium ncha, tupu ọgwụgwọ ga-edo na ọma (nke a metụtara na nhọrọ nke scouring gị n'ụlọnga, penetrant , chelating dispersant, mercerizing penetrant, wdg), sodium sulfate, soda ga-ọma n'ime VAT na ga-ewusi mmepụta management.
6. Alkali ntụpọ:
Isi ihe kpatara ya bụ na mwepụ nke alkali mgbe emerechara (dị ka ịcha ọcha, ịkọ ahịa) adịghị ọcha ma ọ bụ edo, na-ebute ọgbọ ntụpọ alkali, yabụ na anyị ga-ewusi usoro mwepụ nke alkali na usoro mmezi.
E nwere ike ịbụ ihe ndị na-esonụ:
A. Ihe nkiri ihe nkiri adịghị mma, enwere ngọngọ ngwangwa na-agbaso akwa;
B. Mgbe ihe nkiri ahụ na-eme ụfụfụ nke ukwuu, na akwa ahụ nke si na cylinder ahụ, akwa ahụ na-eji ụfụfụ softener;
C. Mmiri mmiri adịghị mma, ike ike dị oke elu, adịghị ọcha na mmiri na softener bond agglutinate na akwa. Factfọdụ ụlọ ọrụ ọbụna na-eji sodium hempetaphosphate ma ọ bụ alum na-emeso mmiri, ndị a bekee na adịghị na mmiri na-etolite flocculent, n'ime adụ ọgwụgwọ bath mgbe ákwà elu na ntụpọ;
D. Akwa n'elu na anion ihe onwunwe, na adụ nhazi, na cationic softener jikọtara n'ime stains, ma ọ bụ akwa akwa na alkali, nke mere na softener odide;
E. Softener Ọdịdị dị iche iche, ụfọdụ na elu okpomọkụ na-eme ka softener si emulsified ala n'ime slag rube isi na ákwà na na.
F. Ihe nro mbụ dị ka soft na ihe ndị ọzọ dị na cylinder dara ma rapara na akwa.
Silicon mmanụ stains:
Nke a bụ ụdị ọnọdụ kachasị sie ike, ihe kpatara ya:
A. Uwe PH uru adịghị eru na-anọpụ iche, karịsịa na alkali, n'ihi na silicone mmanụ demulsifier sere n'elu mmanụ;
B. Ọgwụgwọ mmiri ịsa ahụ adịghị oke oke, ike ike dị oke elu, mmanụ silicone na> 150PPM ekweghị ekwe nke mmiri dị mfe ise n'elu mmanụ;
C. The àgwà nsogbu nke silicone mmanụ na-agụnye ogbenye emulsification (ogbenye nhọrọ nke emulsifier, ogbenye emulsification usoro, kwa nnukwu emulsification ahụ, wdg) na shiee-eguzogide (tumadi nsogbu nke silicone mmanụ n'onwe ya, dị ka àgwà silicone mmanụ, emulsification usoro, ụdị silicone mmanụ, usoro njikọ mmanụ silicone, wdg).
Nwere ike ịhọrọ mmanụ silicone na-eguzogide ọgwụ ịkwa osisi, electrolyte na mgbanwe PH, mana ị kwesịrị ị paya ntị na iji mmanụ silicone na gburugburu ya. I nwekwara ike ịtụle ịhọrọ mmanụ silicone hydrophilic.
9. Ogbenye fluff:
Fluff na ogbenye napping igwe ọrụ (dị ka erughị ala akara, ikpo ala ọsọ, wdg) e nwere ezigbo mmekọrịta, n'ihi napping, softener (akpọkarị wax), ike na static esemokwu ọnụọgụ bụ isi nke akara ákwà, nkwadebe bụ isi nke fuzz softener, ma ọ bụrụ na softener na ogbenye, ga-eduga ná ogbenye fluff, ọbụna na-eme blah gbajiri ma ọ bụ obosara mgbanwe.
2. Common quality nsogbu na resin gụchara:
N'ihi nke free formaldehyde na resin ma ọ bụ n-hydroxymethyl Ọdịdị nke resin decomposition nke formaldehyde kpatara site na formaldehyde ọdịnaya karịrị njedebe. A ga-eji resin dị ala ma ọ bụ na-abụghị nke formaldehyde.
N'ezie, isi mmalite nke nsogbu nke formaldehyde sara mbara nke ukwuu, dị ka onye ọrụ idozi Y, M, softener MS - 20, S - 1, onye na-ahụ maka mmiri na-enweghị nchekwa AEG, FTC, nrapado RF, ire ọkụ retardant THPC na ihe mgbakwunye ndị ọzọ na-emekwa ka formaldehyde karịa ọkọlọtọ. N'otu oge ahụ, mbugharị nke formaldehyde na ikuku nwekwara ike ime ka formaldehyde dị oke na akwa.
Yellow ma ọ bụ agba mgbanwe nsogbu:
Resin gụchara, n'ozuzu ga-eme ka yellowing, otú na-achịkwa PH uru nke resin gụchara gị n'ụlọnga, nwere acid mmiri, catalyst mmiri, dị ka o kwere iji belata yellowing, agba mgbanwe.
(3) nsogbu siri ike:
General resin finishing ga-emepụta nkwụsị siri ike, enwere ike ịgbakwunye onye na-echebe eriri, dị ka oxidized polyethylene wax emulsifier.
General resin finish ga-eme ka onu nke inwe obi ike, enwere ike ịgbakwunye ihe ndị dị nro, mana ọ gaghị emetụta ogo nke resin. Na-eche na mma, iji melite ike dobe nsogbu nwekwara ukwuu mma. Ma na-eche na elu resin na-akpata na-eziga ike na-eche maka nsogbu a ga-kpatara site na ihe ndị dị otú ahụ dị ka resin onwe ya na ihicha, chọrọ ịnọgide na-enwe mma pertinently.
3. Ndị ọzọ àgwà nsogbu:
(1) oke metal ion:
Metal ion, Cu, Cr, Co, Ni, zinc, Hg, As, Pb, Cd na mbupụ ngwaahịa dịka nyocha, ọ bụrụ na ọ gabigara oke, nwekwara nnukwu nsonaazụ, dị ka formaldehyde na inyeaka, ụdị igwe a dị obere, mana ụfọdụ nke ndị na-agbakwunye nwere ike ịkpata oke, dị ka ọkụ na-enwu ọkụ antimony trioxide emulsion nwere ọtụtụ Mercury, ihe na-egbochi mmiri Cr, PhoboTexCR (ciba), Cerolc (sandoz) nwere chromium. Mgbe ejiri ajị ajị ajị ajị mee ya, ọkara agba ejiri mee bụ potassium dichromate ma ọ bụ sodium dichromate ma ọ bụ sodium chromate, Cr6 + ga-agabiga oke.
Nsogbu mgbanwe agba:
Na mgbe emechara, agba mgbanwe ọzọ bụ, ọ ga-a paya ntị na mgbe dyeing dyes nhọrọ, mgbe dyeing proofing, ga-ebu na kwekọrọ ekwekọ gụchara dị ka usoro, ga-dai na ngwụcha nke ikpe ịhọrọ na inyeaka ọrụ nyere ka N'ezie, mma kacha mma ịhọrọ ịghara ime mgbanwe agba mgbe emechara ụlọ ọrụ bụ ezigbo ihe ngwọta, mana nke a nwere ike bụrụ njedebe (dịka ihe na-egbochi antibacterial nke nwere ọla kọpa n'onwe ya nwere agba, onye na-egbochi mmiri na-enwekwa agba, nke nwere chromium nwere ike ibute mgbanwe agba agba) ), yana ịtụle akwa esiji n'oge akọrọ gwọọ agba ọkụ na agba mgbanwe nke sublimation dye na akwa okpomọkụ kpatara site na ihe ndị dị ka odo.
(3) APEO buru ibu:
APEO dị ka ihe ngosi gosipụtara site na mba ụfọdụ, ndị na-egosi ya na mmekpa ahụ nke ndị na-agagharị agagharị, ndị na-abanye n'ime ya, na-etinye akwụkwọ nhicha nke ude mmiri, onye na-eme ka ọ dị elu, onye na-eme ka ọ dị nro mgbe ọ gwụchara ihe niile metụtara ya, dị ka emulsifier na TX, NP nke a na-eji ugbu a. usoro nke surfactant dị ka inyeaka akụrụngwa, ya siri ike igbochi, naanị ụzọ bụ dai dai factory esi ọnwụ iji gburugburu ebe obibi nchebe nwekwara, nditịm-akwụsị nwere APEO na-egbu egbu na-emerụ ihe nwekwara n'ime mmepụta ihe.
Post oge: Feb-26-2020
10F, Shanya International Center, Fuzhou Hi-tech Mpaghara, Fuzhou City, 350108, Fujian, China